जब मानिसहरुले गल्तीले नै गुमाए यी महङ्गा चिज - Internet Khabar
जब मानिसहरुले गल्तीले नै गुमाए यी महङ्गा चिज
October 30, 2018 December 18, 2018 Internet Khabar
एजेन्सी । मानिस बाँचुन्जेल आफूले धन सम्पत्ति जोड्न, महङ्गा सामान जोड्न चाहन्छ । धन सम्पत्तिलाई ऊ सबैभन्दा सुरक्षित राख्ने गर्छ । तर, कुनै कुनै बेला गल्तीले फोहोरमा कुनै बहुमुल्य वस्तु फ्याँकिन्छ, लुगा संगै पैसा धोइन्छ । धेरै मानिसहरुको जीवनमा यस्तो हुने गर्छ, जसले पछि पश्चाताप सिर्जना गर्छ।
जेफ्री नामका एक अमेरिकी व्यक्तिले आफ्नो विवाहको एनिभर्सरीमा श्रीमतीलाई केही राम्रो उपहार दिन चाहन्थे । त्यसैले उनले एउटा राम्रो ब्राण्डको स्टाइलिस ब्याग श्रीमतीलाई उपहार दिन सोंचे । त्यसपछि उनले श्रीमतीलाई त्यो उपहार सर्प्राइजको रुपमा दिने निर्णय गरे।
जेफ्रीले पूरानो ब्यागलाई दानमा दिए र त्यो पूरानो ब्याग भएको ठाउँमा नयाँ ब्याग किनेर ल्याएर राखिदिए। जेफ्रीकी श्रीमतीले जब ब्याग खोज्न आइन्, तब त्यहाँ नयाँ ब्याग देखिन् । जेफ्रीले उनलाई त्यो सर्प्राइज उपहार भएको बताए र पूरानो ब्याग दानमा दिएको खुलाए। त्यो सुनेपछि खुशी हुनुको साटो जेफ्रीकी श्रीमती रिसाइन्, किनकी त्यो पूरानो ब्यागमा तीस लाख बराबरका गहनाहरु थिए । त्यसपछि जेफ्रीकी श्रीमतीले त्यहि दिनमा उनीसंग सम्बन्ध विच्छेद गरिन्।
एप्पल ब्राण्डको मोबाइल, ल्यापटप सबै महँगो हुने गर्छ । साधारण व्यक्तिले एप्पल ब्राण्डको सामान किन्न पनि सक्दैन। एक रसियन व्यक्ति सधै फोहोरमा गएर सामान बटूल्थे । एक दिन फोहोरमा सामान खोज्दै गर्दा उनले एउटा ठूलो बाकस भेटे। जब त्यो बाकस खोले, उनी खुशीले उफ्रीए । किनकि, फोहोरमा भेटिएको त्यो बाकसमा एप्पल ब्राण्डका १५ वटा ल्यापटप थिए र ती सबै नयाँ थिए। कुनै व्यक्तिले गल्तीले त्यो बाकस फोहोरसंगै हाल्यो, तर ती फोहोर खोज्ने व्यक्तिको भने भाग्य चम्कियो।
अमेरिकाको इन्डियानाको एउटा ठाउँमा बाटो बनाउने कार्य भइरहेको थियो । यत्तिकैमा कामदारले बाटोको छेऊमा एउटा टायर देखे। बाटोमा टायर भेटिनु सामान्य हो, तर त्यस टायर भित्र १ लाख डलर पैसा थियो । त्यो पैसा कसैले राखेको थियो या गल्तीले त्यहाँ छुटेको थियो भन्ने कुरा भने खुल्न सकेन।
दलितले पानी छोएको भन्दै वडा अध्यक्षले कुटे स्थानीय, ३ महिनासम्म मुद्दा दर्ता भएन
आगोका गोलाबाट भाग्दै गरेको हात्तीको तस्वीरले जित्यो पुरस्कार
September 12, 2017 October 16, 2018
जिब्रोले कतिवटा स्वाद थाहा पाउँछ ? यस्तो छ नयाँ तथ्य
यो त हद भयो ! युवाहरुले यस्तो गर्दा रहेछन् बाथरुममा
इन्टरनेटमा भाइरल हुँदै यो फोटो, यस्तो छ भित्री रहस्य